प्रदेश १ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार, कस्ताे छ मन्त्रीकाे तयारी? « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
आईपीओ निष्कासनको अन्तिम तयारीमा सर्वोत्तम सिमेन्ट
प्रदेश १ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार, कस्ताे छ मन्त्रीकाे तयारी?
थाहा अनलाइन March 26, 2021 मा प्रकाशित
काठमाडाैं । प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि पार्टी एमाले र माओवादीमा ब्युतिएपछि राईविरुद्ध परेको अविश्वास प्रस्ताव अगाडि नबड्ने भएपछि उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भएका हुन्।
नयाँ थपिएका मन्त्रीहरुको आज दिउँसो १ बजे सपथ ग्रहणको समय तोकिएको छ। मुख्यमन्त्री राईले माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेका टंक आङ्बुहाङलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको जिम्मेवारी दिने भएका छन्। यस अघि सो पदमा नेकपा माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङ्बोहाङ थिए। उनले पद त्यागेपछि ताप्लेजुङका आङ्बुहाङलाई मन्त्री बनाउन लागिएको हो।
नेकपा एमालेको आन्तरिक संघर्षको क्रममा माधव नेपाल समूह र माओवादी छाडेर ओली समूहमा आएकाहरु मन्त्री बन्ने सूचीमा अगाडि रहेका छन्। मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार विस्तार हुने मन्त्रिमण्डलमा सामाजिक विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी खोटाङकी उषाकला राईलाई दिने तयारी भएको छ। यस अघि सो पदमा जीवन घिमिरे रहेका थिए।